Mbilite nke Multidimensional Marketer | Martech Zone
Rị elu nke Ahịa Multidimensional
Fraịdee, Nọvemba 9, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ehihie a, enwere m ọbịbịa mara mma na New Media Club na IU Kokomo. Klọb ahụ bụ ụmụ akwụkwọ, ma ndị ọhụụ ma ndị gụsịrị akwụkwọ, yana ndị prọfesọ na-eduzi ebubo ahụ. Mkparịta ụka ahụ bụ azụmahịa nke mgbasa ozi ọhụrụ.
M na-echeta mgbe mbụ m malitere DK New Media, otu onye ọrụ ibe m ama ama gwara m ka m chefuo ịrụ ọrụ na akụkụ niile nke mbọ ahịa ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'otu mpaghara. Ekwuru m na nke a bụ nsogbu na ụlọ ọrụ… ha nwere micro-elekwasị anya na nka na otu akụkụ nke mgbado anya - akara, imewe, mmekọrịta ọha na eze, ịre ahịa email - mana ha enweghị nghọta zuru oke banyere etu mbọ ha siri metụta mbọ na mgbago.
Examplesfọdụ ihe atụ dị iche iche na-elekwasị anya:
Ihe ọsịse - nnukwu ndị na - ese ihe ghọtara otu esi etinye faịlị ha iji mee ka ọ dị mfe maka onye mmebe weebụ ịbepụ na dais na mmepụta eserese maka saịtị ha na-emejuputa.
Videography - nnukwu ndị na-ese vidio na-aghọta otu esi ebuli peeji ndị ha na-ebipụta ma ghọta usoro mgbasa ozi iji gbasaa ma kwalite iru vidiyo ha.
email Marketing - nnukwu ndị na-ere ahịa email na-amata ohere iji dọọ ndenye aha site na mgbasa ozi mgbasa ozi ka ha wee nwee ike ịmepụta listi ka mma ma kpalite ahịa ndị ọzọ.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - nnukwu ndị ndụmọdụ SEO ghọtakwara njikarịcha ntụgharị na azụmaahịa kachasị mma iji hụ na ogo na-eduga n'ịgbanwe okporo ụzọ.
Ahịa dị ka Nlụpụta
Dị ka ị maara, n'ichepụta agbanweela n'ụsọ oké osimiri nye mba ndị na-emepe emepe. Iwuli obere uzo, megharia akụkụ ya, na iwu ihe ndi ozo iji weputa otutu nde akuku di mfe na mba ndi na etoolite etolite. Ọ bụ ezie na nrụpụta akụkụ arụgoro akụkụ mmiri, North America ka na-ewulite ụlọ nrụpụta mgbakọ ma ka na-emegharị ihe ọhụrụ n'ichepụta ihe. N'ihi ya, ndị okike, ndị nrụpụta na injinia ka nwere ọrụ… mana ndị na-emepụta ya.
Ahịa na-esote. Anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị n’akụkụ mmiri na-arụ ọrụ na-eme nyocha, ọdịnaya, imewe na mmepe. Ogo ọrụ ahụ dị ntakịrị ka ihe anyị nwere ike imepụta na mpaghara, naanị ha na-eme ya nke ọma. Anyị enweghị ike ịsọ mpi. N'ihi ya, azịza ya bụ ịkwalite ngwa ọrụ mmekọrịta ma gbatịa akụrụngwa anyị n'akụkụ oke osimiri.
Ndị ahịa anyị na-eduzi, na-emepụta ma na-etinye usoro niile n'ọrụ. Ọ bụ n'eziokwu ebe kachasị mma anyị. Akụ ndị dị n'akụkụ mmiri na-arụ ọrụ dị ịtụnanya, na-agbatị akụ anyị ma na-enyere anyị aka ịbawanye ụlọ ọrụ anyị na-ebughi ụgwọ nnukwu ego. Ọ bụghị na-enweghị ya bumps, ma ọ na-aga nke ọma na anyị na-anọgide na-eto eto na-esi mma nzaghachi si ahịa.
Nke ahụ bụ ịdọ aka ná ntị nye ndị ahịa n'èzí. Ọ bụrụ n’ikpebie na ịchọrọ ịpụrụiche karia ịghọta etu nka gị siri gbakọọ na ngwungwu zuru oke, a ga - edochi gị ka ndị ọzọ na - arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị, ị na-egwu onwe gị. Onwe m, Amaara m na e nwere ndị ka mma ndị na-ese ihe karịa m, ndị mmepe karịa m, na ndị edemede karịa m… mana ebe m na-asọ mpi bụ otu esi etinye atụmatụ, mmepe na ọdịnaya ọnụ iji chụpụ nsonaazụ. Ọchịchọ m, ihe okike na ahụmịhe gafere m nwere ụdị asọmpi m.
Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ ibe ahụ agbatịwo ndị otu ya karịa ike ha nwere isi ma gbalịsie ike na mgbali elu. O nweela ezigbo ụlọ ọrụ na mmegharị ahụ ga-aga n'ihu na-eme ka ihe ịga nke ọma n'ọhịa ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na marketer rapaara na a ọrụ ebe ị na-agaghị na-amụta gafee ụdịdị dị iche iche nke ahịa azum, teknụzụ na nchoputa yourself ime onwe gị a amara na-amalite na-akụziri onwe gị, na-anwale, na mmejuputa atumatu ebe ọ bụla i nwere ike. Bụrụ oke mkpa site na ịghọta otu esi enjinia ma kpọkọta usoro ahụ! Ndị ahịa na-aghọta nnukwu foto dị na nnukwu mkpa ugbu a… ndị ọkachamara na-abịa ma na-aga.
Tags: dị ọtụtụmultitaskoffshore
Kedu otu azụmahịa si eme enyi na Facebook